English to Myanmar free dictionary online! - MYSTERY ZILLION
English to Myanmar free dictionary online!
June 2011 edited June 2011 in Internet & Email
အဲ့ဒီ website က တော်တော် ကောင်းတယ်။ English to Myanmar ပဲမဟုတ်သေးဘူး၊ကျန်ဘာသာစကား တွေကိုလဲ ပြန်ဆိုနိုင်တယ်။ ဘာသာစကား ၂၄ မျိုးက နေ Myanmar ကိုပြန်ဆိုနိုင်တာ။ ကောင်းမှကောင်းပဲ။
yes, it can use until December 1, 2011 for multi language to Myanmar dictionary. After Dec 1 , 20011 , google translate API will shutdown.
it also using <a href="http://www.ornagai.com">ornagai</a>; data source.
OMG whatasad news !
အော်.. ဒါဆို သူက ornagai ကိုယူသုံးထားတာပေါ့။ ကျေးဇူးပဲ ကိုစေတန်။